Ny matotra nanota dia vita amin'ny metaly tariby bitika tsy metaly, metaly ary hafanana vita amin'ny vy vita amin'ny metaly miovaova. Ny tsiranoka vita amin'ny vy vita amin'ny metaly sosona maro dia afaka mamorona grady kely amin'ny tsipika matevina samihafa, ary afaka mifehy ny fitandremana filtration sy fandotoana tsimoka tokana.
Izy io dia afaka mitazona ny vokatra sivana amin'ny lamba fanivanana tsy an-kijanona, ary manana toetra mampiavaka ny tambajotra telo-dimensional, firafitra porous, porosity avo, faritra midadasika, porefy diamondra ary fizarana fanamiana. Noho izany, ny vy vy tsy miovaova dia nahatsapa fa mahomby amin'ny tsy fahampiana mora misakana sy manimba ny vy vy. Izy io dia mamorona ho an'ny brittleness sy fantsom-bidy madinidra vokatra filtration, ary mamaha ny mari-pana sy ny fanerena fanoherana ny toetran'ny sivana taratasy sy ny lamba fanenomana. Noho izany, ny fahatsapana stainless vy voamarina dia manana fampisehoana filtration tena tsara ary safidy tsara ho an'ny fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ary ny fanoherana avo. Fitaovana sivana.
1. Ny fahaiza-manao fitsaboana fanjaitra lehibe, ny fametrahana fanivanana avo, ny fihenan'ny tsindry ary ny tsingerin'ny fanoloana lava;
2. Miforitra amin'ny asidra nitrika, alkali, solika organika sy ny fahalotoan'ny zava-mahadomelina, ary azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra amin'ny 600 ℃;
3. Haingam-pandeha avo, fahatelon-tena tsara, fatiantoka kely sy fandehanana lehibe;
4. Azo afangaro, mihamaintaana mitombo, ary azo harodana;
5. Izy io dia afaka manadio sy mamelombelona, ​​ary azo ampiasaina imbetsaka.
Fomba fitsarana fitsarana:
Raha jerena ny zava-bitan'ny fibre stainless vy dia nahatsapa famandrihana vita amin'ny marika, voalohany indrindra, ny teboka miboiboika, ny toeran'ny tsindry miiba amin'ny fahasamihafana, ny fahitsiana ary ny fatra maloto, ny tanjaka, ny herin'ny tsindry ary ny tanjaky ny axial dia tokony hojerena.
Ny sandan'ny tsenan'ny teboka voalohany amin'ny singa sivana dia tsy tokony ho ambany noho ny 90% amin'ny sandan'ny tsindry amin'ny teboka voalohany amin'ny menaka.
Toetra mampiavaka ny tsindry miovaova: rehefa eo ho eo amin'ny 30 ° C ny hafanana solika, ny tsindry haavo tsy miova dia 0.15Mpa; rehefa rivotra ny fenitra ny tsiranoka dia 200Pa ny tsindry miendrika ho an'ny hafa.
Ny fametahana dia sata manan-danja amin'ny sivana vita amin'ny vy sivana, izay mamaritra raha afaka hahatratra ny tanjona. Rehefa azo antoka fa feno tanteraka ny firafitry ny sivana, ny fahamarinany dia miankina amin'ny fahamarinan'ny sivana.
Ny votoatin'ny pollutant dia manondro ny votoatin'ny mpandoto misy azy. Ny sivana dia afaka mamitaka ny otrikaretina, fa tsy azo esorina mivantana ao amin'ilay rafitra. Ireo voakaly dia afaka mitoetra ao anaty sivana ihany. Ny haben'ny fandotoana ny sivana dia mitovy amin'ny haben'ny fandotoana isaky ny faritra misy ny faritra sy ny faritra sivana. Ny vokatry ny vokatra dia mifandraika amin'ny fahasamihafan'ny tsindry amin'ny fampiasana marina ny singa sivana.